Mety hamiratra ve i Madagasikara ?
P.Prospère il y a 2 années
Tsy miantehatra afa-tsy amin’ny herin’ny tena !
Fanatontoloana Mandeha ila !
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 12 aprily izao, lahrana 4176, alahadin'ny Paka.
Iray ny adintsika !
P. Prospère il y a 2 années
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny stranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 12 aprily izao, lahrana 4175, alahadin'ny Paka.
Aza manao mpamosavy malemy !
Noho ny toe-draharaha misy eto antanindrazana dia tsy mivoaka na tsy navoaka no marimarina kokoa ny Gazety Lakroa. Notapahana fa havoaka eto amin’ny tranonkala kosa ireo lahatsoratra. Koa manasana anao anaraka sy ho naamana eto amin’ny tranonkala. Ny famintinana rahateo efa renao tao amin’ny RDB.